“Messi Isagoo Dhaawacan Ayuu Cayaarayay Fiinaalka” – Scaloni – Garsoore Sports
“Messi Isagoo Dhaawacan…
Tababaraha xulka qaranka Argentina ee Lionel Scaloni ayaa shaaca ka qaaday in xiddiga kooxda Barcelona Lionel Messi uu qasbay in uu ciyaaro finalka Copa America kaddib markii uu dhaawac soo gaaray bilowgii tartanka.
Messi ayaa soo gabagabeeyay sugitaankiisii dheeraa ee koob caalami ah iyadoo xulkiisa Argentina ay 1-0 kaga badiyeen Brazil ciyaartii finalka ee Copa America 2021 Axaddii, wuxuuna la wadaagay abaalmarinta cayaaryahanka tartanka xiddiga garabka uga cayaara Brazil iyo saaxiibkiisa dhow ee Neymar Junior.
Messi ayaa dhulka isku tuuray kaddib markii lagu dhawaaqat foorida waqtiga buuxa, markaasoo dareenkiisa si cad u buux dhaafiyeen shucuurta guusha, Scaloni-na wuxuu qirtay ciyaarta kaddib in 34-jirka uu go’aansaday inuu ku guuleysto tartanka xagaagan, taasoo xitaa ku qasabtay inuu ku ciyaaro dhaawac .
“Haddii aad ogaan laheyd qaabkii uu ugu ciyaaray Copa America waad sii jeclaan laheyd isaga,” Scaloni ayaa u sheegay suxufiyiinta (via Reuters) ciyaarta ka dib.
“Marnaba ma sameyn kartid la’aanta ciyaaryahan isaga oo kale ah, xitaa marka uusan si buuxda taam u aheyn sida kulankaan iyo kii ka horreeyayba. ” ayuu ku waramay tababaraha.
Dhanka Messi, ahmiyadiisa ayuu hadda u weeciyay caddeeynta mustaqbalkiisa kooxeed. 34 jirkan ayaa haatan ah wakiil xor ah kaddib markii qandaraaskiisa Barcelona uu dhammaaday dhowaan, laakiin waxa uu ogolaaday inuu heshiis cusbooneysiin sameeyo, waxaana uu haatan sugayaa in kooxdiisa ay siideeyso lacagaha loo baahan yahay si heshiiska loo dhammeystiro.
Taasi waxay si dhaqso leh ku imaan kartaa, xilli ay jiraan warar soo jeedinaya in La Liga ay haatan ugu dambeyn ku faraxsan tahay inay heshiiskan dhaqangeliso.